I-Bentley ifuna ukuba i-dgn yayo ithandwe ngakumbi-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/UBentley ufuna ukugqithisa kwakhe kudume kakhulu
Kunyaka ophelileyo Ndathetha Ngaphezu kokuba wayecinga ukuba angabona iBentley ngeendlela zakhe zemodeli. Kulo nyaka, ukutshaya kucacile, kwaye yintoni, emva kokubona iziphumo zokudityaniswa kwezinto ezisandula ukufunyanwa ezinje nge-eB, Exor kunye nokuxhaphazwa okukhulu kwe xml.
Iminyaka emininzi i-dgn ibiyifomathi ye-Bentley ehambelana kakhulu kwaye ikhethekile, nangona i-V7 kunye nomdibaniso we-OpenDGN inokukhutshelwa kwezinye izicelo, uguqulelo lwe-8 iselona luphawu lweenkampani ezinkulu ezinomanyano oluphezulu. nqanaba, njengoko kunjalo nge-AutoDesk, Oracle kunye ne-ESRI. nangona ukuza kuthi ga ngoku ukuyifunda okanye ukuyingenisa ngaphandle kokuyihlela. Amashishini amancinci kunye namalinge evulekileyo ahlala ecaleni, kwaye kwimeko yeempawu ze-xml ezifakwe kwi-xfm ukuza kuthi ga ngoku bezingumbandela weBentley.
Kodwa njengoko kubonisiwe kumkhwa wonyaka ophelileyo, uBentley akasafuni ukuqhubeka nokuba nefomathi ekhethekileyo kwaye akafuni ukuyeka konke okubize ukuba abe ne-V8, ethi emva kweminyaka engaphezulu kwe-10 ibonakale ikhawulwe ngaxeshanye. Xa ujonga imodeli yokuqonda ye-I-modeli, kuyacaca ukuba iBentley ifuna ukugqitha ekusebenzisaneni okuvunyelwa ziitekhnoloji ngoku, ngaphandle kokulahla oko bezisoloko ziqhayisa: ngokuchanekileyo (ngokuchanekileyo), kodwa ingafuni nje ukubonwa ziinjineli , ukuba ifomathi yayo inolwazi olusisiseko oluluncedo lwabanye abasebenzisi (ukuzazi). Umceli mngeni onamandla ukuba uyakwazi ukukhwela ezikhulu esikhepheni kwaye avule iingcango zabantwana abebenomsindo weentsuku ezimbini ngentetho ephindwe kabini ye-opendgn.
Umsi oyintloko: uBentley ufuna ipdf yakhe
Sisigqibo sokuqala endinokusiqonda. Ufuna ukwenza ifomathi enje ngeAcrobat pdf, njenge-AutoDesk dxf, njenge-png, njenge-txt !!!. Kodwa i zikhishwe Akukona ukwenza intsha entsha ye-GNU kodwa ukwenza ezininzi iinkqubo zifunde oko bangayisebenzisa.
I-Geofumadas: Ngaba ucwangcise ukuvelisa uhlobo olutsha lwe-dgn kunye nemodeli ye-I okanye ixesha lama-64-bit?
I-Bentley: Ngokuqinisekileyo akunjalo, i-dgn V8 yinto entle.
(Uphefumlelwe i-2010, i-ProjectWise itafile ejikeleziweyo)
Ngesi sizathu, iBentley ikhangela imodeli ye-I-mod ye-dgn ukuze ibe neempawu ezithandwayo zokusetyenziswa. Ngoku i-dgn inokujongwa kwaye yenziwe imizila esisiseko yokusondeza, i-pam, khetha, jikelezisa, imaphu kunye nokuphononongwa kwedatha. Oku kuvela kubathengi abancinci:
Windows Explorer (ukusuka kwi-Windows 7)
Ngokuqinisekileyo, kuyaqondwa ukuba iinkqubo zeCAD / GIS / CAM kunye neenkcukacha zendawo aziyi kubona i-dgn, kodwa i-geometry kunye neempawu ze-xml ngendlela esetshenziselwa ukuyibona.
Umsi ophakathi, uBentley uhamba ngowesihlanu
Esi ayisosihloko sitsha, ixesha elide bekukho iinzame zokudibanisa uLawulo oluzenzekelayo (i-SCADA) kwidatha yendawo. Ukwenza oku, zonke iinkqubo zeBentley ziya kuba nakho ukuvelisa iimodeli ze-I, eziza kubandakanya eli nqanaba lokudityaniswa kokuhamba kwexesha, imveliso kunye nomjikelo wobomi.
I-Bentley ikwazisa ngeProjekthiWise Navigator yayo. Ukuza kuthi ga ngoku simahla kubasebenzisi bamaphepha-mvume asebenzayo nge-SELECT, ndicinga ukuba iya kuqhubeka okanye iya kuba nexabiso lokomfuziselo ukuze abasebenzisi abangasebenzisi-Bentley babone amandla emva kwemodeli ye-I. I-Navigator yindlalifa kwi-Bentley View yakudala kwaye kamva yatshintshela kwi-Bentley Redline, kodwa ngoku ngokubanakho ngaphaya kwembono, chaza kwaye uprinte:
Ingafunda i-dgn, i-dwg, iifomathi ze-dxf; kwaye ndicinga ukuba unokwenza ngaphezulu. Kule nqanaba i-PW Navigator ihlala kwinqanaba elisisiseko (i-3D) lento ibisenza nangona ungabona idatha yeetheyibhile enxulunyaniswa nezinto kwaye mhlawumbi nonikezelo olusisiseko.
Iphi na potential kwezinye manqanaba mabini, kuba ukuba DGN iye ezifunyenwe I-imodeli Umqambi, ungabona iimpawu ezithile ukuya kwinqanaba intengiselwano (4D), ukwazi ukuba basebenzisane imigqaliselo kunye nokugcina data phakathi iinkalo inkqubo elawulwa ngexesha lokusebenza okanye ukusebenza (5D).
Umsi we-Astral: I-Bentley ifuna ukuya kwinqanaba lesihlanu.
Ukuba yi-dgn eqhelekileyo, kuphela kuphela iipropathi ezisisiseko zezinto ezinje ngombala, ubukhulu, inqanaba, okuphambili, ukugoba, ukulungelelanisa, njl.njl. Injani i-dwg, dxf kunye ne-geopdf. Ngale nto siqonda ukhetho ukuze sikwazi ukubona, ukunikezela, ukucima / ukucima iileya, ukusondeza, ukujikeleza, ukuprinta, njl.
Kodwa ukuba iphathwe nge-Revit okanye yi-Staad, ungazibona iimpawu zolo luqeqesho. Kananjalo nokuba iphathwe nge-Inroads, kwi-Bentley Imephu, kwi-Architecture, njl. ngeenjongo zokuba iinkqubo ezahlukeneyo zinokwenziwa kwinqanaba elinye.
Ngeli Bentley lidibanisa ububanzi besine, kuba iimpawu zobomvu, ukuvuma, ukuphonononga, ukutyikitya ngeenombolo kunye nokugcina imbali yomsebenzi kunye neenkqubo ezininzi zidibanisa inqanaba lesine elibizwa ngexesha.
Kodwa iBentley ayimisi apha kwaye yongeza ubungakanani besihlanu, obunokufaniswa nexabiso lezoqoqosho, imveliso okanye umjikelo wobomi ngaphakathi kwedeshibhodi. Into inokuba nemilinganiselo emithathu kwaye ekuhambeni kwexesha iguquke (ikhule) okanye igcine iminyaka yendalo, kodwa inyani yokuvelisa (ukuphindaphinda), ukuba yinxalenye yokuhamba okanye ukugcina imbali yexabiso lezoqoqosho yinto ethathwa njengesihlanu lobukhulu. Ngengqondo esisiseko, ukudibanisa ukusebenza kunye nokugcinwa kusetyenziswa iziseko ezikrelekrele.
Umzekelo osisiseko woku ngohlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi, ngokudibeneyo ngokudibeneyo kunye nokubalwa kwamanani kwimodeli yedijithali. Kwaye emva koko kulawulwa ukwenziwa, ukufunyanwa kwezinto, ukulawulwa koqikelelo lwangaphambili kunye nolawulo olulandelayo lokusebenza. Chwetheza into oyenzayo NeoDATa kodwa ngokudibanisa nezinto (kungekhona kwizibalo ezisisiseko kwi-2D).
Ngale nto, iBentley yazisa i-Aset Wise, edibanisa iimveliso ezimbini ezahlukeneyo ebesizazi ukuza kuthi ga ngoku (iMicrostation kunye neProjeke Wise). UBentley ubhengeze unxibelelwano kunye neProjekthi kaMicrosoft esinokuthi sithathe unxibelelwano kuyo nohlahlo-lwabiwo mali kunye nezisombululo zokulandela umkhondo weprojekthi. Ikwaqiniswa kwakhona ngokuveliswa koshicilelo olunamandla (i-dynamicplplot) evumela imephu ebithunyelwe ukuprinta ukuze isebenzisane nepensile eqhelekileyo enekhamera eyakhelweyo ngaphakathi ukuze umda, ukuqaphela okanye ukuvunywa kufumaneke ngokuzenzekelayo.
Yintoni esinokuyicinga ukuba iza
Andiyi kulindela ngaphantsi kweBentley, abo abatshitshi babo banobuqhetseba; maxa wambi kangangokuba kubonakala ngathi ngezinye iindawo abaqulunqi bayo baye banesiqubulo esithi "Inkimbinkimbi ipholile, sisonke sisinjini"
Kodwa ndiyabona kulo msi, isenzo esiza kunceda,
ngengqondo yokuba iBentley ayifuni ukuhlala isoftware esebenzisa iifomathi ezingaqhelekanga. Ufuna i-dgn yakho ikwazi njengoko iifomathi ezaziwayo zaziwa. Ngethemba lokuba bayaqhubeka nokulula okufunwa yimigangatho yokutshintsha.
Ke ndicinga ukuba umbono ulungile, hayi ukukhuthaza ifomathi entsha. Le nto besele siyicingele, (asiyikhumbuli i-V7 xa yonke into yayili-16, kunye ne-V8 xa sele kukho amasuntswana angama-32); kulungile ukwazi ukuba sizakuqhubeka nokuyibona i-V8 ixesha elide. Kwaye koku, kufuneka sisamkele isindululo sikaBentley, kwimodeli yayo ye-I, engeyonto inye (kwaye yintoni esiyifunayo ngaphezulu) kune-xml, sithatha kwi-dgn iimpawu ezinye iinkqubo ekufuneka zizibonile, phantsi komxholo kunye nomgangatho BIM.
Eyona nto icetywayo kukuba amaxwebhu kunye ne-SDK yokwenza imodeli ye-I kwezinye izicelo ziya kufumaneka kubantu besithathu. Oku kufuneka kuvule umnyango wokwazisa umxholo, ekusebenziseni imigangatho enje nge-CIS / 2, IFC, kunye ne-ISO 15926. Kodwa mhlawumbi ngale nto ekugqibeleni siza kubona isoftware yeendleko kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluhambelana neMicrostation; phantsi kwantoni asizange sibone okuninzi.
Okokugqibela, ndicinga ukuba kulungile ukuba iBentley ingakhuphi imveliso eninzi yezemfundo. Ukusuka kwinto endiyibonayo kukusetyenziswa kwemephu, ulwakhiwo, amanzi, izityalo, ijiology kunye nolunye uqeqesho kuya kuqhubeka nokuzalisekisa indima yabo kwimveliso esisiseko efikelela ngoku:
I-Microstation yezinto ezintathu eziphambili kumgangatho wabaxumi.
IprojekthiYenza inkqubo yokuthengisana nokuhlanganiswa kwangaphakathi kwinqanaba lomncedisi.
I-AssetWise kwinkqubo yokuthenga ngaphandle, ixhunyiwe okanye ixhunyiwe.
Kwaye ovuyayo ngento ayenzayo, akufanele afune ukutshintsha.
Mhlawumbi kuya kukunceda ukuba unayo iphrojekthi apho uya kukwenza ukuphuhliswa kweenkcukacha ezizodwa apho kufuneka ubone iinkampani ezisebenza nge-AutoDesk kunye nabanye ngeBentley.
Dilemma Ndingumsebenzisi omdala we-AuToCAD. Yintoni eyayingayifunda kuBentley kum?